सेयर बजारमा उत्साह देखिनुमा के–के छन् कारण ? - Birgunj Sanjalसेयर बजारमा उत्साह देखिनुमा के–के छन् कारण ? - Birgunj Sanjalसेयर बजारमा उत्साह देखिनुमा के–के छन् कारण ? - Birgunj Sanjal
१७ असार २०७७, बुधबार १०:०३
काठमाडौं | कोरोना र लक डाउनका कारण आहात बनेका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नेप्सेले भने आशाको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लक डाउनपछि नियमित रुपमा बजार खुलेको दोस्रो दिन मंगलबार सेयरमा सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर कारोबार बन्द भएको छ । बजारमा ३ पटकसम्म बढेर सर्किट लागेपछि दिउँसो १ बजेबाट दिनभरका लागि कारोबार रोकिएको हो । नेप्से ६% ले बढेपछि बजार दिनभरका लागि स्थगित भएको हो । अब नेप्से बुधबार मात्र खुल्नेछ ।